Hobbies | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Vanopika varume ne deers dzakarukwa nemweya
Iwe unoda here kuti mudiwa wako anzwe kutarisirwa kwako, kunyangwe achiri kure newe? Kuti unzwe kudziya kwako nemuviri wako? Ipapo ita chokwadi chekumusunga sweta. Tsotsi yevarume inodziya yakaunzwa kune munhu anodikanwa ...
Game 'Munchkin': mitemo
Isu tese tinoziva kuti mitambo yemabhodhi inonakidza sei. MuRussia, iyo nzvimbo yekutanga mukurumbira inotambwa nemutambo webhodi "Monopoly". Munzvimbo yechipiri mutambo webhodhi "Munchkin", uyo unotamba nemafaro ...
Mavambo kubva kuma module: ruva. Zviitire iwe pachako modular yekutanga
Modular modami inovhara nhamba yakakura yenyaya dzakasiyana. Kubva pamapepa iwe unogona kugadzira maruva, mhuka, mota, zvivakwa. Sarudzo yakakura kwazvo. Mavambo kubva kuMaruva modules ndeye inoshamisa yekuwedzera kune chero imba yemukati. Saka ...
DIY simbi zvigadzirwa: chimiro, mhando uye zvidhori
Mumamiriro ezvinhu emazuva ano, apo musika uzere nezvinhu zvinogadzirwa-nemazhinji, zvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko zvave kutanga kuve mukuda kukuru. Mapazi akasarudzika nezvitoro zvizere kana ma salons kwazvinotengeswa zviri kutanga kuoneka mumaguta ...
Sei kutamba chess? Chess Mitemo
Pakutanga kutarisa, zvinogona kuita sekuti kudzidza kutamba chess kuri nyore, asi kutaura zvazviri, iwe unofanirwa kushanda nesimba uye nekurangarira mashoma emitemo yakakosha. Nyaya yekubva kwaVanhu ...
Openwork pateni "Shell" neanocheka sindano: dhiramu uye tsananguro
Lace inopa anokosha chidhira kumachira. Ndokusaka varidzi vemhizha vachiedza kudzora maitiro akawanda akavhurika sezvinobvira. Uku ndiko kuhwina-kuhwina kushongedza chero chipfeko, zvisinei nemwaka. Mune chinyorwa tichakurukura maitiro ayo ..
Maitiro ekushongedza mabhoti nemaoko ako pachako. Maitiro ekushongedza mabhoti emukomana uye musikana
Bvumirana kuti kwete, kunyange yakakwirira mhando shangu, ichadziya vadiki tsoka dzenyu muchando chando zviri nani pane zvakajairwa bhutsu. Ndizvozvo, zvakajairika. Uye ndinoda kuti makumbo evacheche ave ...
Nzira yekugadzirisa sei jasi rehudzi kubva kune yakasikwa furea iwe pachako?
Mink jasi chiratidzo pamunda wadhodhi, iyo, pamwe, mukadzi wese anoda kuve nayo. Zvigadzirwa zvevhudzi zvepanyama zvakagara zvichikoshesa uye zvaive mufashoni. Iyo inonyanya kudhura iyo chinhu, zvakanyanya izvo zvinoda kuchengetedzwa ...
New Year's anelier kumba: iyo Snow Queen chipfeko
New Year izororo rakanaka. Haisi chete mamiriro emashiripiti, kwete kungofungidzira kwemufaro uye kutarisira kwechipo, asiwo kugona kwepfekero yakapfeka isingawanzo carnival chipfeko, kujaira kumufananidzo weiyo ...
Best selfie mazano. Kutaridzika sei kuitira kuti iyo yekuzviratidzira ndiyo yakanyanya-mhando
Nhasi, mifananidzo yakagadzirwa neyako pachikamera che smartphone yave kuita rudzi rwakakurumbira pane kutora mifananidzo. Kana iwe uchida chigadzirwa chakakwana, yakanaka hairstyle uye zvinonakidza zvinongedzo zvemhando yepamusoro kupfura, iwe unogona ...
Sei kusona Peppy refu Kutengesa zvipfeko nemaoko ako pachako?
Musikana mutsvuku ane vhudzi rakatsvuka akatanga kuve akakurumbira mushure mekutenderera nyaya dzebhuku nemunyori wechiSweden akaiswa. Uye hazvishamise kuti vana vazhinji vanosarudza ichi chifananidzo checarnival chipfeko. Kupenya uye kupusa ...
Pfungwa dzinonakidza dzevhi yemoto kupfura muchisikigo
Dzimwe nguva zvinoita sekunge nguva yezhizha inguva yekunzwa kusuruvara nekuvharira mufurati, yakaputirwa nejira rakapfeka mucheka une bhuku kana tii iri muruoko. Asi usatarisa izvi dzimwe nguva kunonaya uye ...
Maitiro ekugadzira dodecahedron nemaoko ako pachako?
Iyo dodecahedron ndeye isina kujairika mativi matatu-emhando, inosanganisira 12 yakafanana zviso, imwe neimwe inomiririra pentagon yenguva dzose. Kuunganidza dodecahedron nemaoko ako pachako, hazvina kukosha zvachose kuve nehunyanzvi hunokosha hwe3D ...
Maitiro ekuita pikoko kunze kwepepa nemaoko ako pachako
Pepa pamwe ndiyo inonyanya kutenga zvinhu izvo zvinogara zvichinakidza kushanda nazvo. Kubva mairi iwe unogona kugadzira mavambo emamiami, makadhi, maruva, garlands, shiri, mhuka uye zvakawanda. Funga nezve maitiro ekugadzira pikoko kunze kwe ...
Maitiro ekuita mapapiro "kubhururuka" mune masquerade uye muhupenyu?
Mumakirabhu emazuvano kazhinji kazhinji zvinodhura masquerades uye mativi akasiyana epati anoitwa. Asi zvipfeko zvekaristi hazvibatsiri ivo chete. Vazhinji vedu vanofarira kutora chikamu mumapoto mafoto, vachigadzira zvisingaite, ...
Chii chaunogona kugadzira pepa nemaoko ako pachako kumba?
Kugadzirwa kwepepa panguva yakaita shanduko chaiyo, sezvo kwaibvumira kusiya kushandiswa kwepaduru kwakanyanya. Nekuda kweizvi, huwandu hwemabhuku hwakawedzera, uye ruzivo rwakazowanikwa kune vanhu vazhinji. Wato ...
Nhoroondo yekuti ungaisa sei imbwa mune zipper
Nhasi tichakuudza nzira yekuisa imbwa mu zipper. Uyu mubvunzo unogona kunge wakakodzera nekuda kwezvikonzero zvakasiyana: imbwa inogona kupwanya, kurasika kana kusvetuka kubva panjanji. Kazhinji chigadzirwa icho chakafanana ...
Kupi uye sei kutanga mwenje wedenga?
Matenga emuchadenga anozivikanwa pasi pemazita akasiyana siyana; anonyanya kunzi "Chinese" uye "mabhora ekushuva." Zvinotendwa kuti usati wasunungura chimiro chakaganhurirwa mudenga, iwe unofanirwa kunyora chako pachako ...
Chigadzirwa chekapepa chekupenga: dhizaini nemifananidzo. Kudzidzira kugadzira mapepa ekugadzira nevana
Pepa chinhu chakasarudzika chezvinyorwa. Vana vanofarira zvivakwa zvavo: kukoromoka, kubvarura kuita zvidimbu, kutora chero chimiro pasi pesimba remaspi, shandura kubva pafirati sheet kuita matatu-emhando zviverengero semugumisiro wokupeta ...
Isu taisonera mabhegi akanzwa
Munguva pfupi yapfuura, dzakasiyana siyana zvigadzirwa kubva akanzwa uye akanzwa vari kuwedzera kuwedzera mukurumbira. Zvinhu zvinogadzirwa kubva kune izvi zvigadzirwa zvinosiyaniswa nehupfumi hwadzo hwakakosha uye nechitarisiko chakanaka. Kubva pane ichi chinyorwa iwe uchadzidza ...
peji 1 peji 2 ... peji 43 Next Page
Mibvunzo ye210 mu database yakagadzirwa mu 0,706 masekondi.